Waa maxay dib-u-warshadaynta iyo sida ay u caawiso dabeecadda | Bezzia
Waa maxay dib-u-warshadaynta
Susana Garcia | 17/04/2021 10:00 | nololeedka
Waxaan soo saareynaa qashin badan oo aad u badan sidaa darteedna aad ayey ugu adag tahay deegaanka in uusan saameyn. Waxaan ogaannay in macaamiisha weyn ay noo horseedeyso inaan soo saarno tan oo qashin ah sanad walba. Sidaa awgeed, dib-u-warshadayntu waxay noqotay qodob muhiim ah si loo yareeyo kororka qashinka. The dib-u-adeegsiga ayaa ah isbeddel ku habboon oo diiradda saaraya dib-u-warshadaynta iyo inaad hore u mariso wixii aad horey u haysatay.
El dib u isticmaalidda waxaa loo yaqaan 'upcycling'. Ereygan wuxuu inoo sheegayaa in dib-u-warshadaynta loo adeegsado hal-abuur si loo abuuro wax muhiim ah, oo ka qiimo badan wixii aan horay u haysan jirnay, sidaa awgeedna lagu daro ereyga. Shaki la'aan, waa fikrad aad u fiican in lagu soo saaro qiime aad u badan fikradda dib-u-warshadaynta in badanna waxay u arkaan inay sidoo kale tahay wax faa'iido leh.
1 Xagee buu ka yimaadaa dib-u-isticmaalka?
2 Dib-u-warshadaynta moodada
3 Ku adeegsiga farshaxanka ama qurxinta
Xagee buu ka yimaadaa dib-u-isticmaalka?
Dib u isticmaalku waa erey aan cusbayn, maadaama uu soo muuqday sagaashamaadkii. Laakiin ma ahayn illaa qarniga cusub ee ereygan mudnaan yeelan doono. Sagaashameeyadii saameynta deegaanku uma muuqan inay muhiimad gaar ah leedahay laakiin hadda waxaan si aad ah uga feejigan nahay dhibaatooyinka macaamiisha iyo heerka nolosha ee aan hoggaaminno ay ku abuurayaan dabeecadda muddada dhow iyo tan fog. Taasi waa sababta ay u jiraan fikrado badan oo lagu daro qaabab nololeed cusub sida dib-u-isticmaalka, taas oo ku saabsan isticmaalka qalabka aan horey u haysanay inaan abuurno wax cusub oo qiimo leh, wax hal abuur leh oo mar kale la isticmaali karo. Waa eray aad muhiim ugu ah adduunka moodada iyo farshaxanka.
Waxaa jira shirkado badan oo horey ugu soo biiray fikraddan cusub si joogto ah. Way fududahay inaad ku aragto sumado shirkado badan oo noo sheegaya in dharkooda laga abuuray dhar kale oo dib loo isticmaalay ama sidoo kale waxyaabo kale sida muraayadaha ama qalabka caaga ah. Tani waxay naga dhigeysaa inaan aragno inaanan kaliya iibsanayn moodada, laakiin waxaan kaloo iibsanaynaa dhar ka yimid alaabooyin dib loo isticmaalay si loo abuuro wax cusub oo waliba qiime weyn leh, iyaga oo ka dhigaya kuwo mar kale waxtar leh. Fikradda moodada ayaa dhex gashay oo waxaa jira shirkado ganacsi oo aad u badan sida H&M ama Zara oo isku daraya dharka noocan ah. Eeg tilmaamaha waxaadna arki doontaa in qaar badan lagu sameeyay waxyaabo dib loo isticmaalay, markaa waxaad ogaan doontaa inaad daryeesho bey'adda isla waqtigaas oo aad ku raaxeysato moodada cusub.
Ku adeegsiga farshaxanka ama qurxinta
Meel kale oo aan ka heli karno ereygan waa farshaxanka. Dunida farshaxanka ayaa adeegsatay xididka hal abuurka si ay wax u sameyso cusub oo leh agab muddo dheer jiray. Maanta waxaa jira erey loogu magac daray tan oo inbadan iyo fanaaniin badan ayaa go'aansanaya inay nolol cusub siiyaan qaybo iyo agabyo cid kale tuuri karto. Waa hab kale oo qalabkan loogu adeegsado ujeedo wanaagsan, si looga hortago inay sii wasakhoobaan.
Marka la eego qurxinta, waxaad sidoo kale ka heli kartaa fikradaha ereygan. Waxaa jira laambado lagu sameeyay kristantar ama biraha dib loo warshadeeyay iyo waliba dharkaSida lagu arkay moodada, dharka ayaa dib looga isticmaali karaa dhar kale oo duug ah oo la tuuray. Sidan oo kale waxaan ku yeelan doonnaa guri ay dib-u-warshadayntu ka jiri doonto siyaabo badan. Xitaa ku raaxeysiga farshaxanka ama qurxinta iyo moodada waxaan ku caawin karnaa deegaanka waqti isku mid ah iyo wacyigelinta noocan ah waa tan maanta loo baahan yahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » Waa maxay dib-u-warshadaynta
Waxyaabaha la sameeyo tababarka kadib
Dhammaan furayaasha rinjiga nuuradda